IParadesi yoLwandle lwePasifiki Eneembono zoLwandle IYATHENGISWA!!!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTina
I-Oceanfront condo amanyathelo nje ukuya elunxwemeni! Ifumaneka kuLwandle lwasePacific nje iibhloko ezimbini kumantla eCrystal Pier! Eli bali lesibini i-condo liqhayisa ngeembono ezintle zolwandle kwaye lihamba umgama wokuya kwiindawo zokutyela, iivenkile kunye nolwandle! Khwela iibhayisekile, dlala kumaza okanye uphumle nje kwaye wonwabele imbonakalo entle ngaphandle kwefestile ukuba unqwenela njalo! Le yindawo enkulu, iimayile nje ezimbalwa ukusuka Sea World, Old Town, Mission Bay kunye neendawo ezininzi ezimangalisayo ngakumbi San Diego kufuneka anikele!
I-FYI, ixabiso sele lithotyiwe ngenxa ye-Covid-19. Eli licandelo lebali lesibini elineembono ezintle zolwandle ukusuka kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokulala linebhedi enkulu kunye negumbi elikhulu lefestile kunye neyunithi yefestile a/c kunye nefeni yesilingi. Igumbi lokuhlala linendawo yokulala epholileyo enokuthi isetyenziswe njengobungakanani bamawele okanye ukumkanikazi, umabonwakude, indawo yomlilo, ikhitshi evulekileyo ukuze ukonwabele inkampani nganye ngelixa usenza isidlo sakusasa! Indawo yokupaka inendawo yokupaka egciniweyo kwigaraji yokupaka, iphuli kunye nejacuzzi! Sigcina indawo kakuhle ngeetawuli zaselwandle, izitulo, iibhodi ze-boogie kunye neethoyi zaselwandle zabantwana! Ikhitshi inazo zonke iimfuno ezibandakanya i-oveni yetoasta, imicrowave, iblender, iimbiza ezininzi kunye neepani kunye nomenzi wekofu. I-condo ine-wi-fi, intambo, iNetflix kunye ne-Amazon Fire TV.
4.88 · Izimvo eziyi-109
Olu luluntu oluhle lwaselwandle !! Abantu abaninzi baphuma bayonwabela ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile kwi-boardwalk... Abaselwandle, abahamba elwandle! Zininzi iindawo ezintle zokutya ezikufutshane kunye nokuthenga kunye nerenti yebhayisekile.
Nditsalela umnxeba ukuba unemibuzo okanye iinkxalabo :-)
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R4824